Burma Partnership » Statement by the Diplomatic Missions of Australia, Canada, Denmark, France, Japan, New Zealand, the Netherlands, Norway, Republic of Korea, Sweden, the United Kingdom, the United States of America, and the United Nations on Myanmar’s Elections
By Diplomatic of Australia, Canada, Denmark, France, Norway, Republic of Korea, Japan, Sweden, The United Kingdom, The United States of America and United Nations • November 6, 2015
As Myanmar approaches historic elections on Sunday, the diplomatic missions of Australia, Canada, Denmark, France, Japan, New Zealand, the Netherlands, Norway, Republic of Korea, Sweden, the United Kingdom, the United States of America, and the United Nations reaffirm their support for the people of Myanmar. As international partners and close followers of the electoral process, we call on all stakeholders to ensure that these elections are conducted peacefully, transparently, and in accordance with the will of the people; that the period during and after election day is marked by calm, equitable treatment of all; and that there be dialogue among contending parties and candidates. These elections will be an important milestone in Myanmar’s transition to democracy, and the responsibility for their success rests with the government, political parties, civil society, the media, and most importantly, the people of this country, chartingapeaceful, just, and united way forward together. We hope the people of Myanmar will make their voices heard by going to the polls and casting their votes freely. The international community remains committed to support the people of Myanmar throughout the current elections and will continue to follow the process closely through the formation ofanew government in 2016.
မြန်မာ့ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် သြစတြေးလျ၊ ကနေဒါ၊ ဒိန်းမတ်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျပန်၊ နယူးဇီလန်၊ နယ်သာလန်၊ နော်ဝေ၊ ကီုးရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ ဆွီဒင်(ရန်ကုန်ရုံးခွဲ)၊ ဗြိတိန်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသံရုံးများ နှင့် ကုလသမဂ္ဂ၏ကြေညာချက်
တနင်္ဂနွေနေ့ တွင် ကျင်းပတော့မည့် မြန်မာ့သမိုင်းဝင်ရွေးကောက်ပွဲ နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ သြစတေးလျ၊ ကနေဒါ၊ ဒိန်းမတ်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျပန်၊ နယူးဇီလန်၊ နယ်သာလန်၊ နော်ဝေ၊ ကီုးရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ ဆွီဒင် (ရန်ကုန်ရုံးခွဲ)၊ ဗြိတိန်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု သံရုံးများနှင့် ကုလသမဂ္ဂက မြန်မာပြည်သူအားလုံးကို အားပေးထောက်ခံ လျက်ရှိကြောင်း ထပ်လောင်း အတည်ပြု ပြောကြားလိုပါသည်။ ဤရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်ကို အနီးကပ်လေ့လာနေသူ နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲကို ငြိမ်းချမ်းစွာ၊ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာဖြင့် ပြည်သူ အားလုံး၏ ဆန္ဒနှင့် အညီကျင်းပနိုင်ရန်၊ ရွေးကောက်ပွဲကာလနှင့် ရွေးကောက်ပွဲအလွန်ကာလများတွင်လည်း တည်ငြိမ်မှုရှိကြရန်၊ အားလုံးတန်းတူညီမျှ ဆက်ဆံကြရန်၊ ယှဉ်ဘက်ပါတီများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ကြား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြရန် ပန်ကြားအပ်ပါသည်။ ဤရွေးကောက်ပွဲသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး အတွက်အရေးကြီးသော မှတ်တိုင် တစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ဤ် ရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်နိုင်ရေးသည် အစိုးရ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ မီဒီယာများ၊ အထူးသဖြင့် ပြည်သူများတွင် တာဝန်ရှိပြီး ယင်းတာဝန်များကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြင့်အတူတကွ ညီညီညာညာ လက်တွဲကာ ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည်သူများသည်မိမိတို့၏ဆနက္ဒို ထုတ်ဖော်နိုင်ရန်အတွက်မဲရုံများသို့ အရောက်သွားပြီး လွတ်လပ်စွာ မဲပေးကြမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းက မြန်မာပြည်သူများကိုအားပေး ကူညီသွားရန် အခိုင်အမာ ဆုံးဖြတ်ထားသည့်အတိုင်း လက်ရှိရွေးကောက်ပွဲကာလ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးနှင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အစိုးရအသစ်တစ်ရပ်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်အထိအနီးကပ်ဆက်လက်စောင့်ကြည့်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Tags: 2015 Elections, and the United Nations, ASEAN, Australia, Canada, Denmark, France, Human Rights, Japan, New Zealand, Norway, Republic of Korea, Sweden, the Netherlands, the United Kingdom, the United States of America